Ayizizo zonke ii-LED zangaphandle ezenziweyo ezilinganayo. Ngokukhetha okuninzi kunye neempawu ezikhoyo, ukukhetha eyona ifanelekileyo kunokuba ngumceli mngeni. Umboniso othile we-LED uveza amanqanaba asemgangathweni ngelixa abanye begxila ekunikezeleni ngeyona ntengo iphakamileyo yokubonisa i-LED.
Yeyiphi ongathanda ukuya kuyo?
Amaxabiso aphantsi eBonisa ii-LED?
Abavelisi abazithengisayo ngexabiso kuphela ziinkampani zokuhlala kude nazo. Ezi ntlobo zeenkampani ziza kwaye zihambe ngokukhawuleza. Abavelisi abaneemveliso ezingabizi kakhulu basika iikona ezininzi xa kufikwa kuhlobo lwento yangaphakathi abayisebenzisela umboniso we-LED. Oku kukhokelela kwimveliso yexabiso eliphantsi. Ukufihla iinkampani ezikumgangatho ophantsi zisebenzisa amagama entengiso amahle ukuchaza kunye nokuthengisa iimveliso zazo.
Ngokwesiqhelo umenzi womboniso we-LED onamaxabiso asezantsi anikezelayo:
Amanqanaba asezantsi okuqaqamba -i-4,000 kuphela ye-NITS
Kunzima ukusebenzisa isoftware yokuthumela imiyalezo-ukungabikho kwenkxaso kunye nobunzima
Amaxesha amade akhokelayo kwiindawo kunye nenkxaso
Ukunqongophala kweziQinisekiso zoMgangatho- hayi uLuhlu, uLudwe lweCUL okanye uludwe lweEC
Isiqinisekiso esibi - isiqinisekiso seminyaka emi-2 sewaranti
Ukwabelana ngePixel okanye isisombululo esifanelekileyo- isoftware ebanga ukuba ilola imifanekiso ekhokelwayo kodwa ixesha elide liyakwenza iingxaki ezininzi ngokucaca komfanekiso kunye nobomi beemodyuli ze-LED.
Yintoni umboniso we-LED ekumgangatho ophezulu?
Ngokunyaniseka nangokuphambili malunga neemveliso zakho ishishini lakho liya kuhlala likhula kwaye abathengi baya kuthemba umgangatho wakho.
Xa ukhangela umboniso we-LED osemgangathweni kunye nomenzi uhlala ejonga ukubona ukuba ngaba iziboniso zabo zikhokelwayo zezi:
Amaqondo obushushu kunye noVavanyo lweMozulu- iiyunithi ezilinganiswe nge-minus -22 degree ukuya kuma-62 degreesqondo lobushushu kuthetha ukuba umenzi usebenzisa ibakala langaphakathi lezinto zorhwebo. Oku kulingana neminyaka yokusebenza ethembekileyo nakwezona ndawo zinzima.
Ukudlula kuvavanyo olungqongqo- ngaphambi kokuba i-LED ibonise iinqanawa kufuneka kuvavanywe kwaye kudluliswe olu vavanyo lulandelayo: Ukuthembeka kweSiginali, ukuqala kweCold, ukukhutshwa kweMitha, iTrmal, Impact, iLangatye, iMvula, uKhuseleko, kunye novavanyo loKhuseleko.
Izinto zokuxhasa kunye noQeqesho lwaSimahla- ilayibrari yeevidiyo zokurekhodwa kwesoftware kunye noqeqesho lwesoftware olusimahla
Umgangatho woLungiso lweenkampani ezivelisa ii-ISO 9001: 2008 eziqinisekisiweyo luphawu olukhulu lwenkampani eqinileyo. Olu hlobo lwesatifikethi lilingana nomgangatho.
Iwaranti - ubuncinci iwaranti yonyaka emibini. Nayiphi na inkampani elawula iwaranti iyodwa kwaye engasebenzisi nkampani yeinshurensi yomntu wesithathu kuthetha ukuba umenzi ukholelwa kumgangatho weemveliso abazenzayo.